နောက်လိုက်များမှငါ့ကိုကာကွယ်ပါ - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > နေ့-by-နေ့ > အဆိုပါဆက်ခံမှငါ့ကိုကာကွယ်ပါ
“သင်တို့ကိုကြိုဆိုသောသူသည် ငါ့ကိုကြိုဆို၏။ ငါ့ကိုလက်ခံသောသူသည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူကို ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်သောကြောင့် ကြိုဆိုသောသူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကျိုးကို ခံရလိမ့်မည် (မဿဲ ၁၀း၄၀-၄၁ ဘာသာပြန်)။
ကျွန်ုပ်ဦးစီးသော ဂိုဏ်းခွဲ (ဒါက ကျွန်ုပ်အတွက် အခွင့်ထူးဖြစ်သည်) နှင့် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သည် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ဤယုံကြည်ချက်၏ အလေ့အကျင့်တွင် ကျယ်ပြန့်သော ပြောင်းလဲမှုများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်သည် တရားဥပဒေနှင့်အညီ ချုပ်နှောင်ထားပြီး ကျေးဇူးတော်၏ဧဝံဂေလိတရားကို လက်ခံခြင်းသည် အရေးတကြီးဖြစ်သည်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေကို အားလုံးက လက်မခံနိုင်သလို တချို့က သူတို့အပေါ် ဒေါသအရမ်းထွက်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။
သို့သော် မမျှော်လင့်ထားသောအချက်မှာ ကျွန်ုပ်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မုန်းတီးမှုအဆင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခရစ်ယာန်တွေလို့ သတ်မှတ်တဲ့လူတွေက ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သိပ်မပြကြဘူး။ တစ်ချို့က ကျွန်တော့်ဆီ ချက်ချင်းသေဖို့ ဆုတောင်းပေးမယ်လို့ ရေးကြတယ်။ အခြားသူများက ကျွန်ုပ်အား ကွပ်မျက်ခြင်းတွင် ပါဝင်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ မင်းကိုသတ်ချင်သူတိုင်းက ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုနေတယ်လို့ ထင်လိမ့်မယ်၊6,2).
နှစ်တွေတစ်လျှောက်မကျေမနပ်ဒေါသထွက်နေတဲ့စကားတွေနဲ့မုန်းတီးတဲ့စာတွေကကျွန်တော့်ကိုအရင်ဆုံးလောက်အထိမထိခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပိုမိုတင်းကျပ်။ ထူထပ်သည်သို့မဟုတ်လစျြလြူရှုလြှငျမဟုတျပါ။ ဤရွေ့ကားငါတို့အပေါ်မှာတရားဝင်၏သက်ရောက်မှုများဖြစ်ကြသည်။ ဥပဒေကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာခြင်းသည်လုံခြုံရေးစောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊
ကျေးဇူးတော်နှင့်ယှဉ်သောtheဝံဂေလိတရား၏လုံခြုံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသောအခါအချို့ကဤစောင်ဟောင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာလွှင့်ပစ်လိုက်ကြသည်။ အချို့ကမူယင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲကိုင်ထားကြသည်။ သူတို့ကိုရန်သူလိုချင်တဲ့သူတိုင်းမြင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ယေရှုခေတ်ရှိဖာရိရှဲများနှင့်အခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်သူ့ကိုလုံခြုံမှုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်သူ့ကိုသတ်လိုခဲ့ကြသည်။
ယေရှုသည်ဖာရိရှဲများကိုမုန်း။ သူတို့ကိုချစ်တော်မူသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုအဆိုးဝါးဆုံးရန်သူဖြစ်ကြောင်းသူတို့သိသောကြောင့်သူတို့ကိုချစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်များကအမုန်းတရားနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများမှသာယနေ့ခေတ်၌ပင်ရှိသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက “ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်” ဟုဆိုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် “ပြီးပြည့်စုံသောမေတ္တာသည် ကြောက်ရွံ့မှုကို တွန်းလှန်သည်” (1. ဂျိုဟန် 4,18) ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အကြောက်တရားက အချစ်ကို တွန်းပို့တယ်လို့ မပြောပါဘူး။ ဒါတွေအားလုံးကို ပြန်မှတ်မိရင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေက ငါ့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်စက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သခင်ယေရှုက သူ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ဒိုင်းနမစ်တွေကို အပြည့်အ၀ မသိရင်တောင်မှ ငါ့ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကို ချစ်လို့ရတယ်။ အရာအားလုံးကို နည်းနည်းပိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ကူညီပေးတယ်။
သနားကြင်နာတတ်သောဖခင်၊ သူတို့၏ခံစားချက်များကိုရုန်းကန်နေရသော၊ သူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆန့်ကျင်သောသူတို့၏သနားခြင်းကရုဏာတော်ကိုတောင်းလျှောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားနှိမ့်ချစွာဖြင့်ဤသို့ဆုတောင်းပေးပါ၏ - အိုအဘ၊ သူတို့ပေးသောနောင်တရခြင်းနှင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်း၏လက်ဆောင်ကို၎င်း၊ ယရှေု၏နာမ၌၊